3rd Party Gateway သို့ OWON ZigBee စက်ပစ္စည်း
OWON သည် ၇ ကြိမ်မြောက်တရုတ် (Shenzhen) နိုင်ငံတကာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများပြပွဲတွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်
7th China (Shenzhen) International Pet Supplies Exhibition 2021/4 / 15-18 ရှန်ကျန်းကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်ပြပွဲစင်တာ (Futian District) Xiamen OWON Technology Co. , Ltd. ပြပွဲနံပါတ် - 9E-7C ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းကုန်သွယ်ရေးနှင့်မိတ်ဆွေများသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ဖိတ်ကြားသည်။ နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားနှင့်အတူပူးပေါင်းရန်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေ!
ZigBee 3.0: အရာများ၏အင်တာနက်ဖောင်ဒေးရှင်း - စတင်ခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များအတွက်ပွင့်လင်းခြင်း
(Editor ၏မှတ်စု - ဤဆောင်းပါးသည် ZigBee အရင်းအမြစ်လမ်းညွှန်မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ Edition မှဘာသာပြန်ထားသော။ ) Zigbee 3.0 သည် Alliance ၏စျေးကွက် ဦး ဆောင်သောကြိုးမဲ့စံချိန်စံညွှန်းများကိုဒေါင်လိုက်စျေးကွက်များနှင့်အသုံးချမှုများအတွက်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုသို့ပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီအဖြေသည်စမတ်ထုတ်ကုန်များအနက်ကျယ်ပြန့်စွာအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းကိုပေးစွမ်းပြီးနေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုပြည့်ဝစေဖို့အတူတကွအလုပ်လုပ်သောဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလက်လှမ်းမီစေသည်။ ZigBee 3.0 ၏ဖြေရှင်းချက်ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ZigBee၊ IoT နှင့် Global Growth တို့ဖြစ်သည်
21-04-02 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
(Editor ၏မှတ်ချက် - ဤဆောင်းပါးသည် ZigBee အရင်းအမြစ်လမ်းညွှန်မှဘာသာပြန်ထားသော။ ) လေ့လာသုံးသပ်သူများကကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သကဲ့သို့၊ အင်တာနက်၏အရာများ (IoT) ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထိုစိတ်ကူးသည်နေရာတိုင်းတွင်နည်းပညာဝါသနာရှင်များ၏အိပ်မက်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်သုံးစွဲသူများသည်လျင်မြန်စွာသတိပြုမိကြသည်။ ၎င်းတို့သည်နေအိမ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ အသုံးအဆောင်များနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်“ စမတ်” ဟုဆိုကြသည့်ရာနှင့်ချီသောထုတ်ကုန်များကိုစစ်ဆေးနေကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပါတယ် ...
Interoperable ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူလမ်း ဦး ဆောင်
ပွင့်လင်းသောစံသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များစျေးကွက်တွင်အောင်မြင်နိုင်သည့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်မှုကိုသာကောင်းမွန်သည်။ ZigBee အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရအစီအစဉ်ကိုရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူတီထွင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလားတူအတည်ပြုထားသောထုတ်ကုန်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရန်သေချာစေရန်အတွက်၎င်း၏စံချိန်စံညွှန်းများကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးထုတ်ကုန်များသို့အကောင်အထည်ဖော်ရန်ခိုင်လုံသောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပြည့်စုံသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်သည်ပြည့်စုံပြည့်စုံသောပြည့်စုံကောင်းမွန်သောအစုံတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ 400+ memeber ကုမ္ပဏီ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုမြှင့်တင်သည်။
သင်၏ Wireless IOT Solution အတွက် Zigbee ကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုရမည်နည်း။
ပိုကောင်းတဲ့ကိုးကားသည်အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်လော Zigbee Alliance သည် IoT ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ထူးခြားသောကြိုးမဲ့သတ်မှတ်ချက်များ၊ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုရရှိနိုင်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ ဤသတ်မှတ်ချက်များ၊ စံနှုန်းများနှင့်ဖြေရှင်းမှုများအားလုံးသည် IEEE 802.15.4 ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မီဒီယာအသုံးပြုမှုအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများ (PHY / MAC) ကိုအသုံးပြုသည်။ 2.4GHz ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း band နှင့် GHz ဒေသဆိုင်ရာ bandands နှစ်ခုလုံးအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားသောထုတ်လုပ်မှု ၂၀ ကျော်မှရရှိသော IEEE 802.15.4 လိုက်နာသည့် transceiver နှင့် module မ်ားareaရိယာ ...
သင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန် Full-Packaged ODM ၀ န်ဆောင်မှု
OWON OWON Technology (LILLIPUT Group ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု) သည် ISO 9001: 2008 အသိအမှတ်ပြုသောမူရင်းဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ အီလက်ထရောနစ်နှင့်ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်များဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အထူးပြုခဲ့သည်။ embedded computer နှင့် LCD display technology တွင်ခိုင်မာသည့်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းကစားသမားများနှင့် လက်တွဲ၍ OWON သည် IOT နည်းပညာများကို၎င်း၏နည်းပညာရောနှောခြင်းတွင်ထပ်မံပေါင်းစပ်သည်။
အပြည့်စုံဆုံး Zigbee Smart Home System
ZigBee အခြေပြုစမတ်အိမ်သုံးကိရိယာများနှင့်ဖြေရှင်းချက်များကို ဦး ဆောင်သူအဖြစ် OWON ကပိုမိုသောအရာများသည် IoT နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်စမတ်အိမ်စနစ်သည်တန်ဖိုးပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ ဤယုံကြည်ချက်သည် ZigBee-based ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား ၂၀၀ ကျော်ကိုတီထွင်လိုသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ OWON ၏စမတ်ကျသောအိမ်တွင်းစနစ်တွင် - အလင်းရောင်စီမံခန့်ခွဲမှုအိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာထိန်းချုပ်မှုအိမ်တွင်းလုံခြုံမှုသက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု IP ကင်မရာ smrt အိမ်သည်ရှုပ်ထွေးသောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပလပ်များကိုအမြဲတမ်းမိတ်ဆက်ပေးသည်။ 6. အာဂျင်တီးနားဗို့အား: 220V ကြိမ်နှုန်း: 50HZ အင်္ဂါရပ်များ: plug ကိုတစ် ဦး V- ပုံသဏ္flatာန်အတွက်ပြားချပ်ချပ်တံသင်နှစ်ခုနှင့် grounding pin ကိုရှိပါတယ်။ ပြားချပ်ချပ်နှစ်ခုသာရှိသောသာပလပ်၏မူကွဲတစ်ခုလည်းရှိသည်။ သြစတြေးလျ plug သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ socket များနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ 7.Australia Voltage: 240V Frequency: 50HZ ထူးခြားချက်များ။ Plug သည် V-shape တွင်ပြားချပ်ပြားနှစ်ခုနှင့် grounding pin တစ်ခုပါရှိသည်။ ပြားချပ်ချပ်နှစ်ခုသာရှိသောသာပလပ်၏မူကွဲတစ်ခုလည်းရှိသည်။ Au ...
ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများတွင်စွမ်းအင်စံချိန်စံညွှန်းများကွဲပြားသောကြောင့်ဤနေရာတွင်နိုင်ငံ၏ plug အမျိုးအစားအချို့ကိုခွဲထုတ်ထားသည်။ ဒါကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ၁။ China Voltage: 220V Frequency: 50HZ ထူးခြားချက်များ။ Charger plug2shrapnodes သည်ခိုင်ခံ့သည်။ ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဂျပန် pin ကို shrapn ၏ဆွန်းအလယ်ဗဟိုနှင့်ခွဲခြားသည်။ High-power plug-in ပါ ၀ င်သည့် adapter ၏ power head သည် shrapnot pin များဖြစ်သည်။ ပျက်စီးသွားသောအပိုင်းများထဲမှတစ်ခုမှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုအကြောင်းများကြောင့်မြေပြင်ဝါယာများကိုချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။ 2.America ဗို့အား: 120V ...
Single- အဆင့်သို့မဟုတ်သုံးအဆင့်? ဖော်ထုတ်ရန်4နည်းလမ်းများ။
အိမ်များစွာသည်မတူညီသောကြိုးများတပ်ဆင်ထားသဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်လုံးဝကွဲပြားသောနည်းလမ်းများအမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်။ ဤတွင်သင့်အိမ်၌တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ် ၃ ဆင့်ပါဝါရှိမရှိခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောကွဲပြားသောနည်းလမ်း ၄ ခုကိုပြသထားသည်။ နည်းလမ်း ၁ ဖုန်းခေါ်ပါ။ သင်၏လျှပ်စစ် switchboard ကိုကြည့်ရှုရန်အားထုတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းရရန်အတွက်နည်းပညာအရအသုံးမပြုဘဲချက်ချင်းသိလိမ့်မည်။ သင်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကုမ္ပဏီ။ သတင်းကောင်း, သူတို့ကသာဖုန်းကို ca ကို ...
single-phase နှင့် three-phase power အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွင်အဆင့်သည်ဝန်၏ဖြန့်ဝေခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ single-phase နှင့် three-phase power supply အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ three phase နှင့် single phase အကြားခြားနားချက်သည်အဓိကအားဖြင့် wire တစ်ခုစီမှလက်ခံသော voltage တွင်ဖြစ်သည်။ အချို့လူများအတွက်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သော Two-phase power ကဲ့သို့သောအရာများမရှိပါ။ Single-phase power ကို 'split-phase' ဟုခေါ်လေ့ရှိသည်။ လူနေအိမ်များကိုများသောအားဖြင့် single phase power supply ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
NASA သည် Gateway ၏လကမ္ဘာအာကာသစခန်းကိုမြှင့်တင်ရန် SpaceX Falcon Heavy ကိုရွေးချယ်လိုက်သည်
SpaceX သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောလွှတ်တင်ခြင်းနှင့်ဆင်းသက်ခြင်းကြောင့်လူသိများပြီးယခု၎င်းသည် NASA မှနောက်ထပ်အဆင့်မြင့်လွှတ်တင်ရေးကန်ထရိုက်ရရှိခဲ့သည်။ အေဂျင်စီသည် Elon Musk's Rocket Company ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောလလမ်းကြောင်းကိုအာကာသသို့ပို့ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Gateway သည်အာကာသစခန်းငယ်လေးဖြစ်သောလူသားတို့အတွက်ပထမဆုံးရေရှည်စခန်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေကိုအနိမ့်ပိုင်းသို့လှည့်ပတ်သွားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်းနှင့်မတူဘဲတံခါးသည်လကိုလှည့်ပတ်သွားလိမ့်မည် ဒါက ...
OWON သည် ၇ ကြိမ်မြောက်တရုတ် (ရှန်ကျန်း) တွင်ဖြစ်သည်။
ZigBee 3.0: အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာအဖြဲ ... အစည်း ...
သင်၏ Wireless IOT Solu အတွက် Zigbee ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။